Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. रुपन्देहीमा ४२ जनामा डेंगुको संक्रमण – Emountain TV
रुपन्देहीमा ४२ जनामा डेंगुको संक्रमण
रुपन्देही, २४ भदौ । डेंगुको प्रकोपले यतिबेला सर्वसाधारण त्रसित भएका छन् । राजधानी काठमाडौंदेखि पहाड हुँदै तराईको जिल्लाहरु पनि डेंगुबाट अछुतो रहन सकेको छैन । रुपन्देहीमा पनि डेंगु रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार जिल्लामा अहिले सम्म ४२ जनामा डेंगु रोग देखिएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका अुनसार जिल्लामा ४२ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । ५ वर्षका बालबालिकादेखि ७५ वर्षका वृद्धवृद्धा सम्मलाई डेंगु रोग लागेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा मनसुन बल्ल सक्रिय भएकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलने डेंगुको प्रकोप कात्तिक, मंसिरसम्म रहन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथले बताउनु भयो ।
रुपन्देहीमा पहिलो पटक साउन २८ गते एक जनामा डेंगु रोग देखिएको थियो । बुटवल हस्पिटल प्रा.लि.मा ती विरामीको चेकजाँच गर्दा डेंगु देखिएको हो । त्यसयता दैनिक २–३ जनाका दरले डेंगुका बिरामी थपिँदै गएका छन् । डेंगु रोग लागेकामा पुरुष भन्दा महिला धेरै छन् । संक्रमितहरुको अहिले जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मात्रै २६ जना संक्रमितको उपचार जारी छ । चिकित्सकहरुले पानी जम्ने ठाउँ पुर्ने, सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने, सचेतना फैलाउने, घरको झ्याल ढोकामा जाली लगाउने र रोगको लक्षण देखिँन वित्तिकै अस्पताल गएर उपचार गरे डेंगुबाट बच्न सकिने बताउँछन् ।
डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस अल्बोपिक्टस नामका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ । रुपन्देहीमा २०६७/०६८ मा पहिलोपटक डेंगुका विरामी फेला परेका थिए । उक्त वर्ष रुपन्देहीमा मात्रै ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै २०७३/२०७४ र २०७४/२०७५ मा २-२ जना गरी ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । डेंगु देखिए यता ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २०७४/०७५ मा चितवन र रुपन्देहीमा डेंगुको महामारी नै फैलिएको थियो ।
८ वर्षको अन्तरालमा रुपन्देहीमा करिब १५ सयमा डेंगु रोग लागिसकेको छ । जिल्लामा डेंगुका रोगीहरु बढ्दा समेत स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य कार्यालयसंग खासै समन्वय समेत गरेका छैनन् । यसको साथै भैरहवास्थित भिम अस्पतालमा डेंगुको उपचार समेत भएको छैन ।